Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Ukubuyiswa kohambo lomoya ngoJuni kuyaqhubeka nokudana
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ibango lihlala lingaphantsi kakhulu kumanqanaba angaphambi kwe-COVID-19 ngenxa yezithintelo zokuhamba kumazwe aphesheya.
Iyonke imfuno yokuhamba ngenqwelomoya ngoJuni 2021 (kulinganiswa kwiikhilomitha zabahambi zengeniso okanye ii-RPKs) yehle ngama-60.1% xa kuthelekiswa noJuni 2019.
Imfuno yabagibeli bamanye amazwe ngoJuni yayiyi-80.9% ngaphantsi koJuni 2019.
Imfuno yasekhaya iyonke yehle ngama-22.4% xa kuthelekiswa namanqanaba engxakeko (ngoJuni 2019).
The Umbutho wamazwe ngamazwe oThutho loMoya (IATA) wabhengeza ukusebenza kwemfuno yabakhweli ngoJuni 2021 ebonisa uphuculo oluncinci kwiimarike zohambo lomoya lwamazwe aphesheya kunye nasekhaya. Ibango lihlala lingaphantsi kakhulu kumanqanaba angaphambi kwe-COVID-19 ngenxa yezithintelo zokuhamba kumazwe aphesheya.
Njengoko uthelekiso phakathi kwe-2021 kunye ne-2020 yeziphumo zenyanga zihlanekezelwa yimpembelelo engaqhelekanga ye-COVID-19, ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela, lonke uthelekiso lungoJuni 2019, olulandele iphethini yemfuno eqhelekileyo.
Iyonke imfuno yokuhamba ngenqwelomoya ngoJuni 2021 (kulinganiswa ngengeniso yabakhweli kwiikhilomitha okanye ii-RPKs) yehle ngama-60.1% xa kuthelekiswa noJuni 2019. Oko ibikukuphucuka okuncinci ngaphezulu kokuhla kwe-62.9% okurekhodwe ngoMeyi 2021 xa kuthelekiswa noMeyi 2019.
Imfuno yabagibeli bamanye amazwe ngoJuni yayiyi-80.9% ngaphantsi koJuni 2019, uphuculo olusuka kwipesenti ezingama-85.4% ezirekhodwe ngoMeyi 2021 xa kuthelekiswa neminyaka emibini edlulileyo. Yonke imimandla ngaphandle kweAsia-Pacific inegalelo kwimfuno ephezulu kancinci.
Imfuno yasekhaya iyonke yehle ngama-22.4% xa kuthelekiswa namanqanaba engxakeko (ngoJuni 2019), inzuzo encinci ngaphezulu kwe-23.7% yokwehla okurekhodwe ngoMeyi 2021 xa kuthelekiswa nexesha lowama-2019. Ukusebenza kweemarike eziphambili zasekhaya kwaxutywa neRussia inika ingxelo yolwandiso olomeleleyo ngelixa i-China ibuyela kumhlaba ombi.
“Sibona intshukumo kwicala elilungileyo, ngakumbi kwiimarike eziphambili zasekhaya. Kodwa imeko yohambo lwamazwe aphesheya ayikufuphi nalapho kufuneka sikhona. Isilimela kufanele ukuba sisiqalo sexesha lokuphakama, kodwa iinqwelomoya beziphethe iipesenti ezingama-20 kuphela zamanqanaba e-2019. Ayisiyo ukubuyisela kwimeko yesiqhelo, yingxaki eqhubekayo ebangelwe kukungenzi nto kukarhulumente, utshilo uWillie Walsh, uMlawuli Jikelele we-IATA.